Askar Iswiidhish ah oo saarnayd diyaarad shalay deg deg uga degtay Xamar - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Diyaarad deg deg dib ugu degtay kaddib markii dhinac daloolsamay. Foto: STR/TT sawir: STR
Askar Iswiidhish ah oo saarnayd diyaarad shalay deg deg uga degtay Xamar
La daabacay onsdag 3 februari 2016 kl 10.38
Diyaarad kuwa rakaabka ah ayaa shalay markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdishu waxyarna hawada ku jirtay waxaa qarxay dhinac, qaraxaas oo dalool weyn diyaarada ku reebay.
Diyaaradda ayaa si deg deg ah dib ugu noqotay garaoonkii dayuuradaha ee ay ka soo duushay.
Rakaabkii saarnaa diyaaradda waxaa ka mid ahaa labo askeri oo Iswiidhish ah kuwaas oo ku sii jeeday magaalada Djibouti, sida uu noo sheegay Jesper Tengroth oo dhanka saxaafadda u qaabilsan gaashandhiga Sweden.
- Sida wararka nagu soo gaarayaan caafimaadkooda waa fiicanyahay. Dabcan shoog ayey shalay qaadeen laakiin hadda dhibaato dhanka jirka ah ma qabaan, waxaana gacanta ku haya oo daryeelaya saaxiibadooda iyo madaxdooda, ayuu yeri Jesper Tengroth afhayeenka ganshaandhiga Sweden.
Labadan askeri ayaa ka tirsan asker dhowr ah oo Sweden ka jooga dalka Soomaaliaya, qaybna ka ah mashruuca EU Treaning Mission oo ah mashruuc lagu tabobaro ciidamada dowladda Soomaalia. Ciidamadan ayaa muddo ku dhow labo sanno ku sugnaa gudaha Soomaaliya kaddib markii laga soo wareejiyey xero tabobar oo ku taala dalka Unga oo ay ku tabobari jireen ciidamaada dowladda Soomaaliya.
Sida wararka nagu soo gaarayaan diyaaradda waxaa saarnaa rakaab 180 ah, waxayna ku sii jeeday dalka Jabouti. Illa iyo hadda lama shaacin waxa kalifay shilka diyaaradda ka dhex-dhacay.